Madaxweyne Xasan Sheekh oo caawa khudbad ka jeediyey xafladda 26-ka Juun. | Madaxweyne Xasan Sheekh oo caawa khudbad ka jeediyey xafladda 26-ka Juun. – Latest News
« R.W Cabdiwali oo u Ambabaxay Dalka Equatorial Guinea, Kana Qayb Galaya Shirka…
Madaxweyne dalka Jabuuti oo la hadlay Soomaalida iyo Jabuutiyaanka Mareykanka… »
Madaxweyne Xasan Sheekh oo caawa khudbad ka jeediyey xafladda 26-ka Juun.
Muqdisho. 26 Juun 2014 (GT): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa ka qeyb-galay munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayey 54 guuradii ka soo wareegatay maalintii ay xurroobeen gobollada waqooyi isl-markaana ciida Soomaaliyeed laga taago calanakeenna Soomaaliya.
Munaasabadda oo lagu qabtay Muqdisho ayaaa waxaa goob joog ka ahaa, ra’iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka diinta iyo owqaafta, wasiirka warfaafinta, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, wasiirka dhallinyarada iyo ispoortiga,wasiirka ku xigeenno, Xildhibaanno, Gudoomiyaha Gobollka Banaadir iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo soo xiray xafladda ayaa marka hore hambalyo ku aadan 26-Juun u diray dhammaan bulsho weynta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
“Dadka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ugu nool yihiin ee magaca Soomaaliyeed sheeganaya caawa waa u ciid, waxaan rabaa inaan iraahdo ciid wanaagsan, waa maalintii ugu horeeysay ee calan Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed oo xur ah laga taago, qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu weyneyaa maalintaasi ku asteysan maanta” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Sidoo kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey 26 juun 1960-kii ay umadda Soomaaliyeed u istaagtay in ay qaadato kaalinteeda. “ maalintaasi wixii ka dambeeyey Somaaliya waxay u istaagtay in ay kaalinteed qaadato, halgankaasi meel ayuu soo gaaray oo aan dhisanay calankaasi baluuga ah. ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa si gaar ah hambalyo ugu diray dadka ku nool magaalada Hargeysa oo ah meeshii ugu horesay ee calanka Soomaaliyeed laga taago. “Sigaar ah waxaan hambalyo u leenahay dadka ku nool magaalada Hargeysa oo ah halkii maalintaasi laga taagay calanka Soomaaliyeed, waxaan lee yahay hambalyo, waxaan kaloo idin lee yahay Ramadan Kariim”
Madaweynaha ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay guryahooda iyo goobahooda ganacsiga suraan calanka Soomaaliyeed maadaama lagu jiro Todobaadkii xurriyadda. “Todobaadkan waxaa la yiraahdaa Isbuucii xurriyadda, waxaan ugu baaqayaa umadda Soomaaliyeed in calanka Soomaaliyeed ee quruxda badan ee leh midabka baluuga ah ee xidigta dhaxda ku leh in guri kasta iyo goobaha ganacsiga laga taago, waxaan rabnaa inay ka muqato dalka isbuucii heybada , isbuucii sharafta”.
Ugu dambeyntii, Saqdii dhexe ee caawa markii ay munaasabadda soo gaba-gaboowday lana gaaray xiligii calan saarka ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda federeelka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh, Madaxdii kale iyo bulshada ka soo qeyb gashay dhammaan waxay u istaageen calan saarka iyada oo goobta calanka Soomaaliyeed lagu saaray.